Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO oo Warbixin Kooban ka Bixisay Weerarkii Lagu Qaaday Xerada Jeexdin
Xarunta Dhexe ee JWXO oo Warbixin Kooban ka Bixisay Weerarkii Lagu Qaaday Xerada Jeexdin
Posted by ONA Admin	/ October 9, 2014
Xidhiidh deg-deg ah oon la samaynay Xarunta Dhexe ee JWXO ayay nooga warameen dagaal mir ah oo lagu qaaday xerada shidaalka ee Jeexdin. Warbixintan oo Faahfaahin dheeraad ah aan kasoo ururin doono ayay kaga warameen in cutub CWXO oo si fiican u hubaysan uu galay xerada saqdii dhexe, halkaasoo ay weerareen meelo si gaar ah loosii bartilmaansaday.
Waxay halkaa ku gubeen goobihii loogu talagalay iyo gaadhi goobta horyaalay, ka dibna cutubkii weerarka qaaday oo badqaba ayaa kasoo baxay goobihii ay shiishka ku qabteen oo holcaya. Khasaaraha soo gaadhay cadawga iyo siduu ula falgalo weerarkan ayaan dib kasoo tabin doonaa.
Waxay intaa ku dareen in CWXO uu horey digniino u siiyay shirkadaha shidaalka baadha inaysan faraha lasoo galin ciida Ogadenya oo dagaal xoogan uu ka socdo. Iyadoo hadday iska dhaga tiraan digniinaha la siiyay ay masuul ka noqon doonaan khasaaraha soo gaadha.
Guusha Gobanimadoonkaa Leh.